Qaabkee Kaadida Bacrimin ama Koritaan Loogu Sameeyaa? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ciise Cabdullaahi — January 21, 2019
Marka hore waxaad soo diyaarsanee qalabka loogu talagalay in lagu sameeyo (culture) bacriminta kaadida ama koritaanka sida petri-dish, incubator, wireloop, cied agar, urine cap, benzene burner iyo sidoo kale kaadida aad rabto inaad abuurtid.
Petri dish: waa weel loogu talagalay in lagu shubo cuntada lagu koriyo bacteriy-ada.
Incubator: waa qalab loo isticmaalo in lagu abuuro ama lagu koriyo bacteri-yada heer kulkiisa waa 37ºc.
Wireloop: waa bir afdhuuban leh oo loogu talagalay in lagu soo qaado waxwalbo oo lagu samaynaayo abuurid ama koritaan sida dhiigga, kaadida, saxarrada iyo wixii la mid ah mararka qaar waxaa la isticmaallaa qori dheer oo afkiisa ku dhaggan yahay suuf waa marka la rabo in lasoo qaado dheecaan sida dheecaan laga soo qaado dhegta, afka, xubnaha taranka ee dumarka iyo meel walba oo nabar ku yaalo marka la rabo in laga soo qaado dheecaan waa la isticmaali karaa.
CIED Agar: waa cunto lagu koriyo bacteri-yada dhoor nooc oo cunto ah ayaa jirta oo lagu koriyo bacteriyada sida Nutrient agar, Blood agar, MacConkey’s agar sida loo diyaariyo iyo qaabka layskugu daro waxaan uga hadli doonaa buugeyga labaad ee microbiology.
Benezene burner: waa qalab yar oo lagu jeermis dilo bacteriyada qeybta hoose waxaa ugu xiran gaas afka hore waxay kasii deynee dab si loogu jeermis dilo.
Clean catch mid stream: waa nooca todobaad ee loo qaado kaadida noocaan waxa loo isticmaalaa marka la rabo in lagu sameeyo koritaan bacteriyada, macnaha in la abuuro jeermiska ku jira kaadida si loo ogaado nooca uu yahay jeermiskaas.
Qofka bukaanka ah waa in uu si fiican iskaga nadiifiyo inta uu iska soo qaadin kaadida qeybaha hoose ee xubnaha taranka waa in uu ku nadiifiyo tiish ama maro nadiifa ah oo qoyan si looga hortago inay kaadida noqoto mid wasaqeysan ama ay soo raacaan waxyaabo dheeri ah.
Fiiri sawirka HOOSE wuxuu ku muujinayaa qaabka kaadida loo abuuro ama koritaan loogu sameeyo:
Fiiri sawirka HOOSE wuxuu ku muujinaa sida loo midabeeyo bacteri-yada:
Fiiri sawirka HOOSE waa bacteri-yadii oo la midabeeyay:
Waxaa kale oo jira waxyaabo dhaggaxaan ah oo kaadida lagu arko inta badan marka lagu baaraayo microscope-ka sida uric acid, cholesterol, tyrosine, Amorphous phosphates, calcium carbonate, calcium oxalate crystal, cystine crystals inta badan waxa lagu arkaa kaadida.
Fiiri sawiradda HOOSE waa dhaggaxaanta lagu arko kaadida marka lagu fiiriyo microscope-ka:
Tags: Qaabkee Kaadida Bacrimin ama Koritaan Loogu Sameeyaa?
Next post Mala Socotaa in Shahwada Raggu Tahay Qayb Kamid ah Dheecaannada Jirka?
Previous post Waa Maxay Kacdoon?